Tavela ao amin’ny lamosiny ny bala…: nijininika ny ra, mpiasan’ny ladoany voatifitry ny jiolahy | NewsMada
Tsy vita tao amin’ny hopitaly any an-toerana ka voatery nakarina haingana aty Antananarivo ilay lehilahy mpiasan’ny ladoany voatifitry ny jiolahy, tao Tanamakoa, Toamasina, ny faran’ny herinandro teo. Tavela ao amin’ny lamosiny mantsy ny bala nahavoa azy…
Nirefotra vao maraina tamin’ny 8 ora ny poa-basy tao Tanamakoa Toamasina, ny asabotsy teo. Notifirin’ny jiolahy avy eny ambony moto nandehanany ny raim-pianakaviana iray mpiasan’ny ladoany. Teo amin’ny lalam-pasika anoloan’ny lisea frantsay no norarafan’ireo jiolahy ny tifitra ity raim-pianakaviana ity. Voatifitra teo amin’ny lamosiny izy ka tsy afa-nihetsika intsony. Raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, avy nanatitra zanany hanao “cours” isaky ny asabotsy izy no efa nandrasan’ireo jiolahy raha iny hiverina hamonjy ny toeram-piasany iny, tsy lavitra ny sekoly ny misy ny biraon’ny ladoany. Voatifitra avy eny ambony moto nandehanany izy ka nitolefika nianjera amin’ny arabe niaraka amin’ny moto. Lasan’ireo jiolahy mpandroba ny moto nentiny sy ny kitapo teny aminy. Nitsoaka niditra ny fokontany Tanamakoa ireo jioalahy efatra niaraka amin’ny moto, taorian’izay.
Voalaza anefa fa feno mpiambina ity faritra nosehoan’ny fanafihana ity satria maro ireo tranon’olona ambony sy orinasa, miampy ny lisea frantsay. Nijininika ny ra, nentina haingana tao amin’ny hopitaly CHU Morafeno izy, saingy tsy vita tao izany ka nalefa haingana niakatra aty an-drenivohitra satria tavela ao amin’ny lamosiny ny bala.
Manjaka mihitsy ny jiolahy ao Toamasina… Tato ho ato, manao tohivakana ny asan-jiolahy ao Toamasina. Tsikaritra fa manafika maraina eo anelanelan’ny amin’ny 6 ora ka hatramin’ny 8 ora ireo jiolahy. Manjaka tanteraka ny jiolahy ary sahy mihantsy ny mpitandro filaminana na teo aza ny fanamby efa nataon’ny polisy sy zandary amin’ny hoe ny jiolahy indray no hatahotra ny mpitandro filaminana nefa izao ny zava-misy any an-toerana. Ny alahady 13 jona teo aza, renim-pianakaviana iray handeha hivavaka vao maraina no niharan’ny fanendahana tao Mangarivotra. Lasan’ireo jiolahy ny vola entina hatao rakitra sy hividianana odiambavafo aorian’ny firavana. Sao tokony hijerena paikady hafa indray ny hamongorana ny tsy fandriampahalemana, indrindra ny ao Toamasina, mba tsy ireo jiolahy indray no hifehy ny tanàna.